musha FOOTBALL MANAGER Santiago Solari Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nhoroondo Yese yeMutungamiri weBhola uyo aizivikanwa zvikuru nezita rezita rokuti "Indiecito". Sangano redu reSantiago Solari Childhood pamwe ne Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira mhuri yake, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hongu, munhu wese anoziva nezvebasa rake rekutarisira ne Real Madrid. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanofunga nezveBiography yaSantiago Solari iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Santiago Solari Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwokutanga & Mhuri Yacho
Kutanga, zita rake rakazara iSantiago Hernán Solari Poggio. Santiago Solari akazvarwa musi we 7th muna 1976 kuna baba vake, Eduardo Solari uye amai, Alicia Susana Poggio muRosario, Argentina Akazvarwa muRosario, Argentina. Guta rake rekuberekwa, uyewo nzvimbo yekuzvarwa Lionel Messi.
Santiago haana kukura ari oga nevabereki vake. Akakurira nevakoma vake vana; Esteban, David, Martins naLiz Solari. Solari akaberekerwa mumhuri yemitambo. Yake mhuri yebhokisi yebhola yebhoza yemagenhi iri mune zvinopfuura 80% yemhuri yake yevarume, iyo inosanganisira mhuri yake yakareba.
Pakutanga paaiva mwana, zvakava nyore kuti Santiago muduku achinje mararamiro ake. Izvi hazvishamisi sezvo mhuri yababa yakararama upenyu huri mairi. Zvinotoshamisa kuti Santiago haana kumbobvira aine zvakakomba nekuenda kunyanzvi achiri muduku. Kunyange zvazvo vatambi vemahombekombe vanobva kune rimwe bhora rekutsvaga vaizotanga basa ravo munguva ye6, vechidiki Solari havana kumbobvira vatora bhora guru semwana. Akangotamba mutambo webhola nekuda kwekunakidza kusvikira chimwe chinhu chakaitika rimwe zuva.
Santiago Solari Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Kutamba Kwakaita Mutambo Wengoro
Yaiva yezhizha ye1994, uye iyo yeChirungu yeNyika isingakanganwiki yakanga yava kuda kukwira muUnited States. Hondo yeAradi Arabia yenyika yakagara mumusasa wekoroji duku reNew Jersey (Richard Stockton College ikozvino Stockton University) iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwePhililadelphia. Mutambo uyu wakakosha zvikuru kuSantiago nokuti mhuri yake yeSolari yakanga iri kutarisira boka reSaudi Arabia renyika.
Waizviziva here? Mukoma mukuru waSantiago Jorge "El Indio"Solari ndiye mutungamiri mukuru weboka reSaudi apo baba vake Eduardo vakabatsira. Pasi pane mufananidzo wehama mbiri dziri muzera ravo rekare.
Munguva yevhiki shanu yekudzidzira musasa, Santiago aifunga zvakadzama nezvekutora basa mumatambo. Izvi zvakauya mushure mebaba vake Eduardo naLenahan, mutungamiri wenhabvu wechikwata chechikwata muRichard Stockton (umo boka reSAUDI rakadzika) rakashamwaridzana ushamwari hwepedyo.
Munguva iyoyo, Lenahan akafananidzira mumufananidzo uri pamusoro apa wakarondedzerwa kuna Eduardo kana mwanakomana wake wemakore ane gumi nemana anonzi Santiago aigona kupedza semester kuenda kuchikoro kuRichard Stockton uye panguva imwechete kutamba bhora yeboka rekoroji. Vose Santiago nababa vake Eduardo vakabvuma kuti zvaizomupa zvaidiwa nheyo dzinokurumidza asati asvetukira kunyika yenyanzvi yebasa.
Santiago Solari Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Kubudirira kweSauro
Tim Lenahan akakomborerwa nemhuri yeSolari pachisarudzo chake chekupa Santiago svondo rinokurumidza kutamba. Lenahan akamanikidzwa kutora nguva yekusasiya mushure mokunge apihwa kambani yekutarisa kudzidziswa kweSaudi Arabia panguva yeKuita kweKu World.
Vose Lenahan pamwe chete nehama dzeSolari vakabatsira Saudi Arabia kuti vabudirire mukombe wavo wepasi rose wakabudirira muUnited States.
Kune Saudi Arabia, "Solari Family"Inogara nokusingaperi mumoyo yavo nekuda kwehupenyu husingaperi hweUnited States 1994 World Cup.
Santiago Solari Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Post-1994 World Cup
Mushure meU.SA 1994 World Cup, Santiago Solari akatanga basa rake naRichard Stockton College. Mucheche ane makore ane gumi nemana anonzi 17 ane makore akatanga kutamba Dhiganiso 3 yekolgi yebhokisi nekuda kwaTim Lenahan uyo akava mudzidzisi wake mutsva.
Avo vane ruzivo rwakakwana kuti vaone Santiago Solari vachitamba munguva iyoyo vaiyeuka mumwe munhu ane unyanzvi uye ane njere mutambi uyo aive ane zvipo zvepamusoro. Santiago akaonekwa somunhu aigona kuverenga mutambo pane imwe nzvimbo yakasiyana nevashori vake.
Mukuvhiringidzika, muvengi wake waainge achitambudza mumunda aizoita kuti atadze kumushungurudza pane kuedza kurarama nesimba rake rakakwirira.
"Yakanga isiri yebhokisi,"
Santiago Solari akaudza Soccer America muna 2001 yenguva yake kuRichard Stockton (report yeGoal.com).
"Asi yaiva chiitiko pamusoro pehupenyu, pamusoro pekuungana nevanhu, pamusoro pekuziva tsika dzakasiyana uye nzira dzakasiyana dzekufunga. Yakazarura musoro wangu uye chido chokuva muchengeti wepamutambo "
Asi kunze kwebhola, Santiago akashandisa mukana wekudzidza mujiji apo akadzidza Chirungu zviri nani.
Santiago Solari Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Nemhaka yokuti aive akanaka, yakatora mwedzi mina chete neboka rake reConton mushure mekunge mukana webasa rekushandira Newell Old Boys akauya achidana. Usakanganwa, ichi ndicho chikwata chakakwira Lionel Messi. Gore iroro mugore re1995, Solari akasarudza kuronga basa rake revechiduku naRenato Cesarini.
Kusiyana nevamwe vatambi vemabhola uye vatungamiri avo vakapinda makore avo ekugadzirisa zvidzidzo, zvakangotora Solari kubereka 2 makore emutambo musati apinda mupro pro system.
Panguva ino, ichiri mumwaka we 1995-1996, Solari aiziva nzira yega yekuita kuEurope kwaiva yegamba guru uye kukunda guta guru rekuzvarwa. Akasarudza kutanga basa rake rakakura neRwizi Plate. Pambani yeArginine, Solari akaita zita rake nokutungamirira klabhu kuti akunde Libertadores Cup mu1996. Izvi zvakavhura nzira yake kuenda kuEurope.
Santiago Solari Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Muna 1999, Santiago akayambuka yeAtlantic kuenda kuAtletico Madrid kuSpain. Iyi ndiyo nguva nguva kechikwata chakanga chichirwisana uye chakanga chiri pamucheto wekuregererwa. Nemhaka yekutamba kwake, Real Madrid yakatanga kufarira kwaari mushure megore neAtletico.
Real Madrid haazeze kuita sarudzo yeSanago Solari uye kuisa muC2000, mugore iroro Atletico akabatwa. Santiago Solari akatamba kwemazuva mashanu ku Real (2000-2005) kusanganisira vana pamwe chete nenhau Zidane, uyo akasvika ku2001. Aive nhengo inokosha ye 'Galactico' era.
Waizviziva here? Solari akatanga kutama kwakaguma Zidane achifunga nezvekutsvaga kwake mukurumbira neLeverkusen mumugumo we2002 Champions League. Asi kunze kwekuita mikana, Solari akawanawo zvinangwa zvikuru zve Real Madrid. Tarisa zvimwe zvezvinangwa zvake pasi;
Santiago Solari Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Munguva yekutamba kwake, kutamba kwaSolari kwakange kusina kungobata trophies yemaodzanyemba kuSpain. Kunaka kwake kwakanaka kwakamupawo nyota.
Mugore re 2002, French premium cable terevhizheni, Canal + votora Santiago se "Mutambi weSexiest wegore"Nokuda kwerunhare rwake runoshamisa.
Mukupindura kumukomborero, Santiago Solari akati;
"Ndinoonga vanhu vakavhota ini, asi ndine chokwadi kuti yakagumburwa," Solari quipped. "Tichaona kana ndikapiwa rimwe basa mubhizimisi refirimu pandinobva. bhora "
Uyewo nezvehupenyu hwaSolari, Argentine yakamborondedzerwa CNN se "Akadzidziswa zvikuru, kutaura, uzivi uye anodikanwa mabhuku." Mushure mekurega kuenda kutamba nhabvu, Solari akanyora chikamu chekutungamira pepanhau reSpain El Pais.
Santiago Solari Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Kusiyana nevamwe vose vomumhuri yake, Solari anonyanya ari oga uye anochengetedza mashoko pamusoro pemukadzi wake nevana chete kwaari. Parizvino, akanga asina ruzivo rwehuwandu hwemagariro evanhu. Asi runyerekupe mudzimai weSantiago Solari nevana vane nguva dzose yekubuda nayo. Maererano nemishumo, Santiago akaroora nevana vatatu.
Santiago Solari Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Kubata Upenyu Hwemhuri
Zvimwe Pamusoro paBaba vake naMunun'una: Kutamba bhora sekutengeswa kwakatanga nehanzvadzi mbiri, Jorge Raul naEduardo Miguel avo vakaumba nheyo yebhola yeSolari Family. Vose vakoma vaifananidzirwa pasi vakatamba kutamba mauto avo muNewell's Old Boys uye Rosario Central pamwe chete.
Kunyange zvazvo vasina kutamba pamwe chete nekuda kwezera rezera remakore mapfumbamwe rakaparadzanisa ivo. Pakati pehama mbiri, Jorge aive akakurumbira. Waizviziva here? Jorge Solari akarwisana neEngland muChitatu yeClining Cup Cup. Pasi apa ari kutora fikisi yekurwisana neEngland munguva yeClumble World Cup.
Paaiita basa muMexico, Jorge Solari akatumidzwa zita rokuti "El Indio". Iri zita rakapfuudzwa kuSantiago Solari iye zvino anonzi "El Indiesito"Zvinoreva kuti mudiki muIndia. Baba vaSantiago Eduardo Miguel Solari vakatanga basa rake rebasa muRosario Central (gore ra1966) gore iroro hama yake yakadzama muNyika yeNyika. Pasi pane mufananidzo webaba vaSantiago panguva yekutamba basa.
Eduardo akatamba basa rake rose muSouth America (Argentina & Columbia) uye akasiya basa mugore re1981.
Mhuri yeSolari yaivewo nemurume webhokisi achiuya kuzoroora mwanasikana wavo. Mugore re 1992, muzukuru waSantiago Natalia, mwanasikana waJorge Solari akawana kurohwa kune vatatu vema Champions League, Fernando Redondo (inoratidzwa pasi apa). Redondo yakamirira Real Madrid neboka reArginia.
Santiago Solari Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Nhengo dzeMhuri Dzekare
Pakati pehama dzaSantiago, Esteban Andrés Solari Poggio Tano akafananidzirwa pasi apa ndiwo anozivikanwa zvikuru. Mutambi wenhau yeArginine akaberekwa musi we2nd waJune, 1980.
Esteban panguva yebasa rake nguva yakaita semupambi uye akawana zvinopfuura 120 zvinangwa pakati pe2001 ne2016. David Eduardo Solari Poggio akafananidzirwa pasi apa anotevera anozivikanwa pakati pehama dzeSantiago.
David akaberekwa pa 21st yaMarch, 1986 muBarranquilla muguta muColumbia. Senguva yekunyora, iye zvino ari kutamba Enosis Neon Paralimni FC mu Cypriot Second Division. Martin Solari, uyo anozivikanwa zvishomanana nezvake ndiye mukoma muduku kuna Saniago. Sezvakaita mudzimai waSantiago nevana, zvishoma chaizvo zvinozivikanwawo nezvaamai vaSantiago Solari vanoenda nezita rokuti Alicia Susana Poggio.
NezveSantiago Solari Sister: Liz Solari inozivikanwa Murengeti weArgentine uyo akatanga pakutanga basa rake semuenzaniso, asati aenda huru mumatare emunharaunda uye kune dzimwe nyika.
Liz akaberekwa musi waJune 18, 1983, in Barranquilla, Korombiya. Nguva yake yekuzvarwa inopindirana nenguva iyo baba vake vakagadzirira boka reColumbian.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinoonga nekuverenga sangano redu reSantiago Solari Childhood uye Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Louis van Gaal Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts